रत्न घोटाला। एक पत्थर खरिद नगरी कसरी टाढा हुँदैन?
रत्न र गहना विक्रेताहरू धेरै टेक्निकहरू प्रयोग गर्छन् तपाईंलाई खरीद गर्नको लागि मनाउन। तपाईं गरिब वा करोडपति हुनुहुन्छ भने त्यसले केही फरक पार्दैन। तिनीहरू जान्दछन् कि कसरी तपाईंलाई पक्का बनाउनको लागि कुनै तरिका खोज्ने। उनीहरूले तपाइँलाई हेरिरहेका छन् जबसम्म तिनीहरूले तपाइँका आँखाहरूमा ताराहरू चम्किरहेको देख्दैनन्। तिनीहरू तपाईंलाई सम्मोहित गर्छन्, तपाईंको पैसा तपाईंको जेबमा खर्च गर्न।
रत्न विक्रेताहरू जीमोलोजिस्ट छैनन्
पत्थर बिक्रेताहरूको 99.99% gemologists होइन। तिनीहरू विक्रेताहरू हुन्, तिनीहरूले केहि घण्टा वा केही दिनको लागि बिक्रीको ढुङ्गामा प्रशिक्षित गरे। तपाईंसँग त्यहाँ कुनै साथी छैन। तिनीहरू तपाईंलाई पैसा बनाउन एक तरिकाको रूपमा हेर्छन्।
ढु stone्गा वा गहना किन्नको उत्तम तरिका भनेको विक्रेताको तर्क सुन्नुहुन्न, केवल तपाईंलाई के थाहा छ र के तपाईंले देख्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्नु हो। विक्रेता तपाईंलाई भावनात्मक रुपले छुनु रोक्ने छैन, तपाईंलाई सार्नको लागि। त्यसोभए, विरोध गर्नुहोस्, आफ्नो तार्किक अर्थ सुन्नुहोस्।
सानो पसलहरूमा घोटाला
साना पसल, खानी वा ढु stone्गा उत्पादन क्षेत्रमा घोटालाबाट सुरू गरौं।
यहाँ केही उदाहरणहरू छन्
यदि एक विक्रेताले तपाईंलाई गहना वा ढुङ्गाको लागि एक मूल्य प्रदान गर्दछ भने, तुरुन्तै मूल्यमा आधा घटाउन प्रस्ताव गर्दछ, तपाईलाई राम्रो भाग्नै पर्छ।
आफैलाई सोध्नुहोस्: यदि तपाईं रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ भने एक घर, एक रूस्ट चिकन वा टूथपेस्टको एक ट्याब्लेट किन्न सक्नुहुनेछ, के तपाइँ एक प्रोमोशनल चिन्ह बिना 50% छूट प्रदान गर्नुहुनेछ? जवाफ कुनै छैन। यो अर्थ बनाउन छैन, पत्थर सही वा गलत छ भने यसलाई फरक छैन, तपाईं फ्याट गरिनेछ।
स्टोन परीक्षकहरू, ढुङ्गाको गर्मी, अरू विरुद्ध रमाइरहेका पत्थर आदि।
सबैले कुनै अर्थ गर्दैन। अर्थात् कि एक सिंथेटिक पत्थर को रासायनिक संरचना एक प्राकृतिक पत्थर को रूप मा एक नै छ। यसले सबै वास्तविक परीक्षणहरूको लागि वास्तविक स्टोन जस्तो प्रतिक्रिया गर्नेछ जुन तिनीहरू गुजारा हुनेछन्।
गिलासको टुक्रामा एक सिंथेटिक पत्थर तुलना गर्नुहोस्
तपाईंलाई धोका दिन, विक्रेताहरूले सिन्थेटिक स्टोनलाई सिसाको टुक्रासँग तुलना गर्छन्। रुबीको उदाहरणका लागि कुरा गरौं। रुबी कोरन्डम परिवारबाट रातो ढु stone्गा हो। रासायनिक संरचना मुख्यतया एल्युमिनियम अक्साइड हो। एक कृत्रिम माणिक वास्तविक एक जस्तै समान रासायनिक संरचनाको साथ पनि बनेको छ। तीनिहरू सबै टेस्टहरूमा उस्तै तरीकाले प्रतिक्रिया देखाउनेछ जुन तपाईंलाई देखाइनेछ। विक्रेताहरु2ढु stones्गा तुलना गर्नेछ: एक सिंथेटिक माणिक र रातो गिलास को एक टुक्रा। ती दुई भिन्न पत्थरहरू हुन् भनेर वर्णन गर्दै त्यो गिलास नक्कली ढु stone्गा हो र त्यो सिंथेटिक रूबी हो एक वास्तविक ढु stone्गा हो। तर यो झूट हो। दुबै पत्थरहरू नक्कली छन् र त्यसको कुनै मूल्य छैन।
सुन्दर पसलमा स्क्याम
अब, एक सुन्दर स्टोर, एक लक्जरी तिमाही, एक किनमेल मॉल वा हवाई अड्डाको उदाहरण।
विक्रेताहरूले तपाईंलाई समझाउने प्रयास गर्दैन कि ढुङ्गा परीक्षणहरू वा व्यापारिक छूटहरूले सही हो। यस अवस्थामा प्रयोग गरिएको प्रविधिको धेरै सूक्ष्म छ: उपस्थितिहरू र भाषाहरूको तत्वहरू।
कसलाई सम्बोधन गर्दथ्यो कि एक पसल यस्तो असाधारण उपस्थितिको साथ, राम्रो तरिकाले लुगा लगाएको र शिक्षित पसलहरुमा भरिएको छ, वास्तवमा नक्कली सामान बेच्दै हुनुहुन्छ?
प्रश्नहरू सोधेर केहि परीक्षण गर्नुहोस्। यदि तपाईंले जवाफहरू सावधानीपूर्वक सुन्नुभयो भने, तपाईंले ती वाक्यहरू राम्ररी याद गर्न सक्नुहुन्छ। उडान उडानका प्रतिक्रियाहरू जस्तै, वा कल केन्द्र होस्टहरू पनि।
प्रश्न 1: के तपाई प्राकृतिक ढुङ्गाहरू बेच्नुहुन्छ?
उत्तर: महोदया, यो वास्तविक क्रिस्टल हो।
जेमोलजीमा शब्द "क्रिस्टल" ले पारदर्शी सामग्रीलाई जनाउँछ। यसको मतलब यो होइन कि ढु stone्गा प्राकृतिक वा कृत्रिम छ।
प्रश्न 2: के धातु चांदी छ?
उत्तर: महोदया, यो बहुमूल्य धातु हो।
उनले न “हो” वा “होईन” भने। उनले तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिइनन्।
"बहुमूल्य धातु" शब्दको कुनै कानुनी अर्थ पनि छैन। वास्तवमा, यो स्टोरले धातुको धातुबाट बनेका गहनाहरू बेच्दछ जसमा कुनै चाँदी, सुन, वा कुनै बहुमूल्य धातु समावेश छैन।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्याड प्राप्त गर्नबाट बचाउन कुनै चमत्कारपूर्ण तरिका छैन। तपाईंको सामान्य अर्थ तपाईंको उत्तम रक्षा हो।
यदि तपाईं यस विषयमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, सिद्धान्तबाट अभ्यासमा जान चाहानुहुन्छ, हामी प्रस्ताव गर्दछौं जीमोलोजी पाठ्यक्रमहरू.